घरेलु उपाय अपनाउने हो भने जति सेक्स गर्दा पनि गर्भ बस्दैन ! - Movies Club Nepal
Home Mixed Bag	घरेलु उपाय अपनाउने हो भने जति सेक्स गर्दा पनि गर्भ बस्दैन !
घरेलु उपाय अपनाउने हो भने जति सेक्स गर्दा पनि गर्भ बस्दैन !
by Movie Club Nepal ११ बैशाख २०७६, बुधबार १४:३२ October 10, 2019
मनाव सभ्यतालाई अगाडी बढाउनको लागि यौन सम्बन्धको छुट्टै महत्व हुने गर्छ। सन्तान प्राप्तिको लागि मानवले मात्र नभई हरेक जीवले यौन सम्बन्ध बनाउने गर्छन्। अहिले विश्वमा जनसंख्या बढेको कारण कम मात्र सन्तान जन्माउने चलन रहेको छ। “सानो परिवार खुशी परिवार” भन्ने नारा विश्वभरमा चर्चित रहेको छ। अहिले गर्भधारण रोक्नको लागि विभिन्न साधनहरु आइसकेका छन्। असुरक्षित यौन सम्बन्धको कारण महिलाहरु गर्भवती हुने संभवाना हुने गर्छ। यसरी हुने गर्भधारण रोक्नको लागि औसधिहरु पनि रहेका छन्। तर निम्न उल्लेखित उपाय भने परापूर्वकाल देखि गर्भधरण रोख्नको लागि प्रयोग गर्ने गरिन्थ्यो।
गाजरको एक चम्चा बिउलाई पानिमा मिसाएर दिनहु पीउनाले गर्भधारण नहुने मान्यता परापूर्वकाल देखि चली आएको छ। असुरक्षित यौन सम्बन्ध भएको खण्डमा महिलाले काँचो मेवा एक हप्ता सम्म खानाले गर्भधारण हुँदैन। यो पनि गर्भ रोक्ने घरेलु उपायलाई रुपमा धेरै समय देखि अपनाउने गरिन्छ। हिंगलाई तातो पानिमा हालेर खानाले पनि गर्भधारण देखि बचाउन सक्छ। यस उपाय पनि प्राचिन गर्भ रोक्ने पद्दति रहेको छ । दालचिनीलाई पनि गर्भ रोक्ने घरेलू वस्तुको रुपमा लिन सकिन्छ। यसले आफ्नो असर देखाउन ढिला गर्ने हुँदा लामो समय सम्म प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ।
कहिल्यै धनी बन्न नदिने यी ६ बानी !
१० माघ २०७५, बिहीबार १४:०४
तपाईं पहिलो पटक सेक्स गर्दै हुनुन्छ ?
८ माघ २०७५, मंगलवार १४:१२
२५ श्रावण २०७५, शुक्रबार १५:३८
इच्छा हुँदा पनि उत्तेजना आउँदैन, यस्तो छ कारण...
१२ माघ २०७५, शनिबार २०:३६
१२ माघ २०७५, शनिबार २०:३७
११ बैशाख २०७६, बुधबार १४:३५
विवाहको पहिलो रात यौन सम्बन्ध राख्ने कि नराख्ने...
११ बैशाख २०७६, बुधबार १४:१६
यी ४ यौनरोगबाट कण्डमले पनि बचाउँन सक्दैन !
१२ माघ २०७५, शनिबार १९:१६
सेक्स गर्नुभन्दा अगाडी पिसाब फेर्नुको बेफाइदा !
२१ माघ २०७५, सोमबार १२:३०
सम्भोग गर्दा यौन आसनका जोखिमहरु
११ बैशाख २०७६, बुधबार १२:१९